Raw Coluracetam Powder (135463-81-9) Vagadziri - Phcoker
Raw Coluracetam powder inhengo nyowani uye yakasarudzika yeiyo racetam kirasi yekugadzira nootropics. Yakavandudzwa se… ..
Coluracetam (MKC-231) inogadzira racetam chinodhaka chinonzi ingootropic komputa. Zvidzidzo zvinoratidza kuti inogona kusimudzira kugona uye ndangariro, uye vashandisi vanoti zvakare inovandudza kusangana, kutarisa, uye kuona.
Coluracetam inowedzera yakakwira-kuyanana choline inotora (HACU), inova danho-rinotapudza danho reacetylcholine (ACh) synthesis. Zvidzidzo zvakaratidza coluracetam powder yekuvandudza kukanganisika kwekudzidza pane imwe chete yemumuromo dose yakapihwa kumakonzo akafumurwa kune cholinergic neurotoxins. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakaratidza kuti zvinogona kukonzeresa zvinogara kwenguva refu zvinokonzeresa mumakonzo anorapwa eurlinxinxin nekuchinja iyo choline mutakuri mutemo system.